Butterfly valve structure နိယာမနှင့် သက်ဆိုင်သော အခါသမယ
admin မှ 22-02-21 ရက်နေ့တွင်
လိပ်ပြာအဆို့ရှင်တပ်ဆင်ခြင်းအချက်များ၏ အဓိကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်နှစ်ခု- တပ်ဆင်မှုအနေအထား၊ အမြင့်နှင့် အဝင်နှင့်ထွက်ပေါက်၏ ဦးတည်ချက်သည် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။ကြားခံစီးဆင်းမှု၏ ဦးတည်ရာသည် valve body တွင် အမှတ်အသားပြုထားသော မြှားဦးတည်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု...
ပလတ်စတစ်အဆို့ရှင်များ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
admin မှ 22-01-26 ရက်နေ့တွင်
နေ့စဉ် အဆို့ရှင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 1. အဆို့ရှင်ကို ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ရှိသော အခန်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး လမ်းကြောင်း၏ အဆုံးနှစ်ဖက်လုံးကို ပိတ်ဆို့ထားရပါမည်။2. အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားသော Valve များကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပြီး၊ ဖုန်များကို ဖယ်ရှားသင့်ပြီး သံချေးတက်သည့်ဆီများကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လိမ်းပေးသင့်ပါသည်။...
အသုံးများတဲ့ ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းသုံးမျိုးက ဘာတွေလဲ။
admin မှ 22-01-24 ရက်နေ့တွင်
PPR၊ PVC၊ PE 1 ဖြစ်သင့်ပါသည်။ အသုံးများသော ပလတ်စတစ်ပိုက်များမှာ- PPR (polypropylene), PVC (polyvinyl chloride), PB (polybutene), PE-RT (အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော polyethylene), PE၊ (polyethylene) \_HDPE (အားဖြည့်ထားသော သိပ်သည်းဆမြင့်သော ပိုလီအီသလင်း) အီသလင်း) စသည်တို့၊ ဒုတိယ၊ ပလပ်စတစ်ပိုက်၏ အရွယ်အစား...
1. Compact BALL VALVE X9002 ကို ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ရှိသော အခန်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး လမ်းကြောင်း၏ စွန်းနှစ်ဖက်ကို ပိတ်ဆို့ထားရပါမည်။2. အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားသော valves များအား ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် စီမံဆောင်ရွက်နေသော မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သံချေးဆန့်ကျင်ဆီလိမ်းရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။3. တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပါ...
ပလပ်စတစ်အဆို့ရှင်များသည် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ သံချေးတက်ခြင်းစကေးကို စုပ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် ၎င်း၏သက်တမ်းကို ပိုရှည်စေသည့် ပလပ်စတစ်ပိုက်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်သော အားသာချက်များစွာရှိသည်။ဤအရာများသည် ပလပ်စတစ် MF BALL VALVE X9011 ၏ အခြားပစ္စည်းများ၏ အဆို့ရှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်ပါ။
admin မှ 22-01-06 ရက်နေ့
တစ်ခုတည်းသော union ball valve x9201-t ၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလတ်စားပေါက်ကြားမှုကိုကာကွယ်ရန် valve seal ၏စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းပြီး valve ၏အရေးကြီးဆုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။မီဒီယာများ ယိုစိမ့်မှုကြောင့် ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် မတော်တဆမှုများပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။မီးလောင်လွယ်ခြင်းအတွက်...
သင်မသိသော ပလတ်စတစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင်များ၏ လက္ခဏာများ 6
အဖွင့်အပိတ်အပိုင်း (စက်လုံး) သည် valve stem မှ မောင်းနှင်ပြီး valve stem ၏ ဝင်ရိုးတစ်ဝိုက်တွင် လှည့်ပတ်သည်။၎င်းကို ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ ကြားခံအား ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ရန် အဓိကအသုံးပြုပြီး အရည်များကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ဤ valve အမျိုးအစားကို ယေဘုယျအားဖြင့် အလျားလိုက် တပ်ဆင်သင့်သည်...
ပလပ်စတစ် faucet တွေရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
စျေးကွက်တွင် faucet ပစ္စည်းများအများအပြားရှိသည်။အသုံးများသော stainless steel faucet များအပြင် ပလပ်စတစ် faucet များကိုလည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ဒါဆို ပလပ်စတစ် faucet တွေရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ပလပ်စတစ် faucet ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။အားသာချက် အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်...
သိပ္ပံနည်းပညာစက်မှုဥယျာဉ်၊ Qinggang အပိုင်း၊ Yuhuan၊ Zhejiang၊ တရုတ်နိုင်ငံ